नारीका चार चरित्र ! यी चार चरित्र भएको नारीको स्भाव कस्ताे ? - Mitho Khabar
June 24, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on नारीका चार चरित्र ! यी चार चरित्र भएको नारीको स्भाव कस्ताे ?
आफ्नो प्रिय मित्रलाई यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि नसुनाउनुहोस्!
चर्चित नायिका झरना थापाकी छोरी नायिका सुहानाको विबाह गरिदिने मुडमा, को हुन् झरनाका ह्याण्डसम ज्वाई ?